Ogaden News Agency (ONA) – Adkaysi iyo Dibin Qaniin Umbaa Lagaga Gudbi Karaa Barnaamijka FOG – Noora Afgaab.
Adkaysi iyo Dibin Qaniin Umbaa Lagaga Gudbi Karaa Barnaamijka FOG – Noora Afgaab.
Posted by ONA Admin	/ July 7, 2016
Ereyga FOG oo macnihiisu yahay Ceeryaamo, waxaa sidaan soo sheegnay laga soo qaatay xarfaha ugu horeeya ee Fear, Obligation, Guilt. Markaan ka hadlayno halganka ka socda Ogadenya, ujeedada laga leeyahay in Caadifadda qofka la adeegsado (Emotional blackmail) waa inuu qofka halganka ku jira ka walwalo oo uu ka cabasado (Fear) dhibka soo gaadhaya eheladiisa oo uu dareemo inuu dayacay masuuliyadii ka saarnayd eheladiisa (Obligation) haduu fulin waayo shuruudaha laga doonayo oo sidaa uu ku dareemo dambi (Guilt) inuu ka galay ehealadiisa. Hadafka ugu dambeeya barnaamijka waa inuu Halgamaaga hadheeyo khalkhal oo uu kala garan waayo siduu u kala dooran lahaa oo u kala maareyn lahaa masuuliyadda halganka oo u baahan adkaysi iyo mintidnimo, iyo masuuliyada ehaladiisa xerada gumaysiga ku jirta oo la dul taagan –Hana Galaafan-. Wuxuu galay dabinkii lala doonayay markuu qof halgan ku jira hadheeyo hami iyo walwal ah siduu u badbaadin lahaa eheladiisa oo kali ah.
Taariikhda qoran een akhrino, waxaa ugu horeeyay qof la damco in caadifad lagaga saaro mabada’a uu qaatay, saxaabiga Sacad bin Abi-Waqaas RC. Wuxuu ahaa 17 jir kolkoo islaamay Sacad, wuxuuna ahaa qofkii 3xaad ee gala islaamka. Sacad wuxuu ahaa wiil caan ku ah baarinimada hooyadii oy aad u koolkoolin jirtay. Wuxuu yidhi isagoo ka sheekaynaya qisadaa; hooyaday markay maqashay in aan islaamay ayay qaraxday oy igu tidhi; maxay tahay diintan la sheegay inaad gashay ood uga tagtay diintii aabahaa iyo hooyadaa. Walaahi in aanan afka saareyn raashin iyo biyo ilaa aan ka dhinto oo Qureesh ay kugu caydo inaad hooyadaa disahay saad waligaa ugu noolaato ceeb iyo murugo, hadaadan ku soo noqonin diintii aabayaashaa,. Waxaan ku idhi buu yidhi; hayeelin sidaa sababtoo ah kama baxayo diintayda. Hooyaday way kaga dhabaysay, maalmo ayayna diiday inay wax cunto ama cabto. Waxaan u imid buu yidhi ayadoon maalmo wax cunin oo aad u liidata oo dhulka ka kici la’, waxaana ku idhi; Hooyoy aad ayaan ku jeclahay, laakiin Ilaahay iyo Rasuulkiisa ayaan kaa jeclahay. Walaahi in aanan ka tagaynin diintayda hadaad yeelato 1000 nafood oo kolba ay mid kaasii baxayso, ee raashinka iska cun. Islaantii markay aragtay mintidnimada wiilkeeda ayay barnaamijkii joojisay. Ujeedada waxay ahayd inuu u jilco Sacad RC markuu arko hooyadii oo dhimanaysa ka dibna uu ka baxo islaamnimada.
Halgamaaga meelaha uu ugu jilicsan yahay ee gumaysiga uu ka abaaro waxaa ka mid ah gumaysiga oo cudhaadh (Hostage) u haysta shacabka oo shuruud uga dhigaya baad-baadintooda inuu isdhiibo oo halganka uu joojiyo. Hadday tahay bulshada oo guud ahaan loo dhibaataynayo iyo hadday tahay miduu si gooni ah ugu bartilmaansanayo xubin ka mid ah halgamaaga, ujeedada uu ka leeyahay gumaysiga waa mid laga wada dharagsan yahay. Waa in la joojiyo halganka socda oo la oogolaado gumaysigiisa. Sidaan dhowr jeeroo hore soo tilmaanay, shacabkii u jilca dhibka haysta iyo midka sida gaarka ah ugu wajahan xubnaha halgamaya, wuxuu ku jirayaa adoonsi abada ah. Waana midda inaga reebtay asaageen.
Gumaysi meeloo joogaba wuu ka midaysan yahay argagixinta iyo gumaadka dadweynaha, ujeedada uu ka leeyahayna waa inuu kala sooco shacabka iyo halgamaaga, ka dibna xubnaha firfircoon uu gooni u beegsado, ka dibna ciqaab gaar ah oo ka duwan midka guud ahaan shacabka u haysta uu si guuni ah u saaro ehelada ugu dhow halgamaaga. Markay sidaa u dhacdo, waxaa loo baahan yahay inuu halgamaaga u muuqdo sawirka guud iyo qiimaha wuxuu u halgamayo. Inuu fahmo halgamaaga in dhibaatada haysata shacabkiisa aan lagaga bixi karin qof iyo laba ehaladiisa oo laga soo saaro xabsiga, taasoo ah barnaamijka (FOG) oo gumaysiga uu doonayo inuu ku hanto caadifadda halgamaaga (Emotional blackmail);
Waxaa lagaga gudbi karaa oo kali ah; Adkaysi ..Adkaysi ..Adkaysi (اصبروا وصابروا) Iyo cadawga oo la tuso in aan loogu dabcaynin dhibaatada uu ku hayo dadka shacabka ah een waxba galabsan(ورابطوا ) Isla markaana la kordhiyo dadaalka halganka si Guusha loo gaadho (لعلكم تفلحون ) siduu Ilaahay inoogu sheegay Quraanka;
.يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو الله لعلكم تفلحون
Waxaa kaloo muhiim ah in la fahmo, gumaysiga xoogiisa wuxuu ku jiraa kala qaybinta bulshada ilaa heer uu gaadhsiiyo inuu qof walba ka fikiro naftiisa oo kali ah siduu uga badbaadin lahaa dabadhilifyada iyo jawasiista ugu dhex jira shacabka ee la jinsiga ah.
Gumaysiga sidaan kusoo sheegnay qaybtii hore wuxuu ku dadaalayaa inuu ka badalo shacabkeenna dhaqankii Gumaysi-diidka ahaa, inuu ka fikiro qof walba siduu naftiisa uga badbaadin lahaa argagixinta joogtada ah ee ciidamadiisa iyo calood u shaqaysta-yaasha ay ku hayaan shacabka. Si loo gaadhsiiyo bulshada Heerkaa Kali u Noolaashaha ah, wuxuu adeegsadaa gumaysiga farsamooyin kala duwan ay ka mid yihiin;
In danta qabiilkiisa looga dhigo qof walba hadaf uu higsanayo oo la kiciyo dareenka qabyaaladda.
Inay ka dhexaysa beelaha wada daga tartan, colaad iyo is-jalaafayn aan lahayn dhamaad, si gumaysiga iyo adeegayaashiisa u noqdaan kuwa u kala gar qaadaya.
In kolba hoos looga sii socdo, ilaa jilib iyo laf loo kala saaro qabiilkii wada jiray, iyadoo tartankii iyo is-jalaafayntii ay socoto.
Qaybaha dambe ayaan kusii lafaguri doonaa kala qaybinta bulshada ujeedada iyo wadada uu gumaysiga u marayo. La socda.